WHO Director-General vanotaura musangano weG20 Health and Finance Ministers
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » WHO Director-General vanotaura musangano weG20 Health and Finance Ministers
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
WHO Director-General vanotaura musangano weG20 Health and Finance Ministers.
Kunyangwe isu tichirwa kupedza denda iri, tinofanira kudzidza zvidzidzo zvariri kutidzidzisa uye kugadzirira chinotevera.
Inotungamirwa neiyo COVID-19 Delta musiyano, nyaya uye kufa kuri kuwedzera zvakare pasirese.
Kunyangwe majekiseni eCCIDID-19 achiponesa hupenyu, haamise kutapurirana kwehutachiona.
Chikamu che36% chevanhu pasi rose chave kubaiwa nhomba. Asi muAfrica, inongova 6%.
WHO Director-General kuvhura kutaura pamusangano weG20 Health and Finance Ministers - 29 Gumiguru 2021:
Wako Mukuru Daniel Franco,
Wako Mukuru Roberto Speranza,
Ndinokutendai nemukana wekubatana nemi nhasi.
Ndine chokwadi chekuti pakatanga kurongwa musangano uyu, tese taitarisira kuti denda rapera. Hazvisizvo.
Inofambiswa neiyo Delta musiyano, nyaya uye kufa kuri kuwedzera zvakare pasirese, kusanganisira mune dzakawanda dzenyika dzako.
Kunyangwe majekiseni achiponesa hupenyu, haamise kutapurirana, ndosaka nyika yega yega ichifanira kuramba ichishandisa chishandiso chese, kusanganisira hutano hweveruzhinji uye magariro, pamwe chete nemiedzo, marapirwo uye majekiseni.
Nhasi, WHO uye vatinoshanda navo vakaburitsa iyo itsva Strategic Plan uye Budget yeKuwana Covid-19 Zvishandiso Accelerator, pamwe nekukumbira kwe23.4 bhiriyoni emadhora ekuAmerica kuona kuti bvunzo, marapirwo uye majekiseni anoenda kwaanonyanya kudiwa.
Ndatenda nekuona kukosha kwe WHOZvinangwa zvekudzivirira zvinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana zvehuwandu hwenyika dzese mukupera kwa40, uye makumi manomwe muzana kusvika pakati pa2021.
Kuti tizadzikise tarisiro yedu ye40%, tinoda mamwe madosi emamiriyoni mazana mashanu nemakumi mashanu. Ndiko kugadzirwa kwemazuva gumi. Sekutaura kunoita shamwari yangu Gordon Brown, inopfuura hafu yenhamba iyi yakagara isingashandiswe munyika dzako, uye inogona kutumirwa pakarepo.
Ichokwadi kuti boka diki renyika rine zvimwe zvarisingakwanisi, zvatiri kushanda kuti tigadzirise.
Asi kune ruzhinji rwenyika, ingori nyaya yekusakwana kwekupa.